नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट, बजेटको पूर्णपाठ यस्तो छ !
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट, बजेटको पूर्णपाठ यस्तो छ !
बजेटका मुख्य बिशेषताहरु यस्ता छन :
सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले खाइपाई आएको महँगी भत्ता पनि कायम राखेको छ। बढेको तलब साउनदेखि लागू हुनेछ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएका छन्।
रूसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न गएकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा उच्च वृद्धि भएको छ।
आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई तिर्नुपर्नेमा खरिद मूल्यमा विभिन्न किसिमका कर, महसुल, शुल्कसहित आफ्नो प्रशासनिक खर्च र ढुवानी लागत जोडेर बिक्री मूल्य तय गर्छ।
सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन तत्काललाई कर वा शुल्कमा छुट दिएर मूल्य घटाउन लागेको हो। कुन कर वा शुल्क हटाउने भन्ने खुलाइएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार कर हटाउने सम्भावना धेरै छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ। यसैलाई हटाइने गृहकार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। यसबारे टुंगो लागेपछि आयल निगमले मूल्य घोषणा गर्नेछ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदुषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जाने रकम जोडेको हुन्छ।
यी सबै कर र शुल्क जोड्दा एक लिटर पेट्रोल (१८० रूपैयाँ) मा ६३ रूपैयाँ ३४ पैसा सरकारी खातामा जान्छ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६३ रूपैयाँ छ।
त्यस्तै, बीमा प्रिमियममा खर्च हुने ४० हजारसम्मको आम्दानी पनि करकट्टी हुने भएको छ। सीमाभन्दा कममा पनि लाग्ने न्यूनतम १ प्रतिशत आयकरको व्यवस्थाबारे बजेट भने मौन छ।
हाल व्यक्तिलाई वार्षिक ४ लाखसम्मको आम्दानीमा र दम्पत्तिलाई वार्षिक ४ लाख ५० हजारसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत आयकर लाग्छ। त्यसभन्दा माथिको कमाईमा थप हुने रकमको आधारमा कर लाग्ने गरेको छ। अर्थात् कुनै व्यक्तिले वार्षिक ५ लाख ५० हजार कमाउँछ भने उसले ४ लाख ५० हजारसम्म एक प्रतिशतको दरमा र बाँकी एक लाख रूपैयाँमा भने १० प्रतिशतको दरमा आयकर तिर्नुपर्छ।
त्यस्तै, सात लाख ५० हजार कमाई हुनेले माथिका दरमा कर तिरेपछि बाँकी हुने २ लाखमा भने २० प्रतिशत थप आयकर तिर्नुपर्छ। वार्षिक २० लाख कमाई गर्नेले सीमा अनुसार माथिका कर तिरेपछि बाँकी १२ लाख ५० हजारमा भने ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।
२० लाखभन्दा बढी कमाई हुनेले भने ३६ प्रतिशतको दरमा आयकर तिर्नुपर्छ। यी माथिका सीमामा के हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन।
सरकारले प्रत्येक परिवारलाई एउटा बिजुली चुलो अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ।
संसदमा आइतबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत लागू हुनेछ।
सर्वसाधारणले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिकाका माध्यमबाट अनुदानको बिजुली चुलो प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
विद्युतको पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका हकमा धुवाँमुक्त भान्छा अभियानअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ।
सरकारले भारतबाट आयात गरी उच्च अनुदानमा बिक्री गर्दै आएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग निरूत्साहित गर्ने नीतिअनुरूप बिजुली चुलो र सुधारिएको चुलो प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको हो।
खाना पकाउन बिजुली चुलोको प्रयोगलाई बढावा दिन बिजुलीमा अनुदान दिने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। बिजुली नभएका ठाउँमा बायोग्यास र सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
सरकारले एलपी ग्यास निरूत्साहित गर्ने कार्यक्रम सरकारी कार्यालयहरूबाटै सुरू गर्ने भएको छ।
सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डायलाइसिस गराएका, निको भएका क्यान्सरका बिरामी र मेरूदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई महिनामा पाँच हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
त्यस्तै सरकारले आगामी वर्ष ६५५ वटा अस्पताल बनाइसक्न १० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। २५ जिल्लाहरूमा सुत्केरीलाई पोषण भत्ता स्वरूप ५ हजार रूपैयाँ दिने पनि निर्णय गरेको छ।
पछिल्लो समय नेपाली किसानहरू भारतीय उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेकाले धेरैले अन्न उत्पादन कटौती गरेका छन्। भारतीय किसानले धान लगायत अन्न उत्पादन गर्न बिजुली, सिँचाइ, मल, बैंक ब्याज लगायतमा सरकारी अनुदान पाउँदै आएको छ। यसले भारतीय उत्पादन तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ। यसको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो पर्छ। प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेकाले कतिपय किसानले अन्नबाली छाडेर नगदेबालीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ पहल नगरी आयात कटौतीको नीति लिँदा बजार आपूर्ति असन्तुलित हुन सक्छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नबनाउने भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारको बजेट विनियोजन गरेको हो। त्यस्तै, भैरहवा र पोखरा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सी वे निर्माणका लागि २ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट, समपूरक, समानीकरण र विशेष अनुदान अन्तर्गत ४ खर्ब ४२ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ।
वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
समपूरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदान ४ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ र ९ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ रकम हस्तान्रण हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड रूपैयाँमा झारेको छ। अहिले यस्तो सीमा ५ करोड रूपैयाँ छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरिएको हो। ठूला लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लगानीको स्वीकृतिको माग गरे पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्ने गरी ७ दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिइने भएको छ।
लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनामा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सुरूको वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड बजेट छुट्याइएको थियो। आव २०७६/०७७ मा यो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको थियो। त्यस्तै आव २०७८/०७९ मा १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो। झिनामसिना काममै चार आर्थिक वर्षमा राज्य कोषको ३१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
यो वर्ष पनि दुई लाखलाई १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको छ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने, गरिब घरपरिवारको एकीकृत सूचना प्रणालीको निर्माण गर्ने, गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।
सहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास गर्ने भएको छ।
यस्ता शहरी गरिबलाई आधारभूत सुविधा सहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गरिने छ। भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सूदुरपश्चिम क्षेत्रको हरैया र प्रदेश नम्बर एकको सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिने भएको छ। औद्योगिक पूर्वाधारको लागि सरकारले ३ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि उद्योगीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिइने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
सरकारले मदन भण्डारी राजमार्ग का लागि दुई अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
त्यस्तै हुलाकी राजमार्गका लागि अर्ब ७ करोड बजेट छुट्याइएको छ। चालु आवमा सरकारले यो राजमार्ग निर्माणका लागि ६ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छ।
पुष्पलाल राजमार्ग निर्माणका लागि भने ९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटबाट २ सय ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुका साथै १६ वटा पुल निर्माण हुने बताइएको छ।
सडक सञ्जाल विस्तार गरी आवागमन सहज बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले ८ सय किलोमिटर सडक विस्तार गर्नेछ। त्यस्तै, २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
पुष्पलाल मध्य-पहाडी राजमार्गमा पर्ने १० वटा नयाँ सहर आयोजना निर्माणका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस सहरअन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौर जहारी, दैलेखको राकम, कर्णाली, अछामको साफेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर पर्नेछन्।
यसअघि पहिलो चरणमा कोटेश्वरबाट कलंकीसम्मको चक्रपथलाई आठ लेनमा विस्तार गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ। चिनियाँ सहयोगमा भएको चक्रपथ विस्तारमा केही प्राविधिक त्रुटि भएकाले दुर्घटनाको जोखिम भएको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
नयाँ चरणको चक्रपथ विस्तारमा उक्त त्रुटि सच्याउने भनिएको छ।
सरकारले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि ९४ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यो आयोजना छ सय ३५ मेगावाट उत्पादन क्षमता हो।
त्यस्तै, सरकारले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि एक अर्ब बजेट छुट्याएको छ। यो आयोजना आगामी वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने योजना सरकारको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ७ प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको भएपनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो।
मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित पार्ने सरकारी लक्ष्य छ।